Destinations Around the world leisure Travel Consultant Day and Evening
ပြည်တွင်း/ပြည်ပ လေယာဉ်လက်မှတ်များနှင့် ပြည်တွင်းအဝေးပြေးကားလက်မှတ်များအရောင်းဌာန၊ ဗုဒ္ဓဂယာ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်များနှင့် ထိုင်း၊ စင်င်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ် အစရှိသော ပြည်ပခရီးစဉ်များ…
မြန်မာပြည်အနှံ့တန်ခိုးကြီးဘုရားစုံဖူး၊ အပန်းဖြေခရီးသွားပို့ဆောင်ရေးနှင့် ရခိုင်ပြည် မဟာမြတ်မုနိ၊ ငပလီကမ်းခြေ၊ မြောက်ဦး ဘုရားစုံဖူးခရီးစဉ်များ...
လူကြီးမင်းစိတ်တိုင်းကျ မြန်ဆန်တိကျ သေချာစွာ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှူတွေ ပေးနေပါပြီ။
Lost Kingdom of Arakan (Rakhine)
Domestic & International Service (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ၀န်ဆောင်မှူ) ရန်ကုန်မြို့တွင်း မည်သည့် နေရာမဆို အိမ်တိုင်ရာရောက် ၀န်ဆောင်မှူပေးခြင်းနှင့် နယ်မြို့များအတွက် Parcel, Document, etc, များ သင့်တော်သော ဈေးနှူန်းဖြင့် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်း၊ နယ်ဝေး (၂၂)မြို့နယ်များအား အိမ်တိုင်ရာအရောက်/ ကားဂိတ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့များသို့ အိမ်တိုင်ရာအရောက် မြန်ဆန်စွာ အထူးဝန်ဆောင်မှူ ပေးနေပါသည်။
မနက် ၉ နာရီ မှ နေ့လည် ၁၂ နာရီအတွင်း ခေါ်ဆိုထားသော Pick up များအတွက် နေ့ချင်း အိမ်တိုင်ရာအရောက် Pick up System ထားရှိခြင်း၊ Online Shopping Parcel, Invitation Cards များအတွက် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ မြန်ဆန်စွာ ပို့ဆောင်ပေးခြင်းနှင့် ငွေသိမ်းပေးခြင်း၊ တစ်ပတ်တချိန် Payment System ထားရှိခြင်း၊ လစဉ်လတိုင်း အသုံးပြုသော Customer များနှင့် Online Shopping များ၊ အစိုးရရုံးများ၊ Company အတွက် အထူး Discount System များ ထားရှိခြင်း၊ Payment များအား Bank Account, ATM Card, Visa Card များနှင့် လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ငွေပေးချေနိုင်မှူ စနစ်ထားရှိပါသည်။
* International & Domestic Air Ticketing
* Inbound & Outbound Tours Arrangement
* Hotel Reservation (Worldwide)
* Express Bus Tickets Services
Mandalay Mahamuni History
Mandalay Hill History
Ever Roll Travel & Tours Co., Ltd is an experienced tourism company established in 2016 byateam of Burmese Travel experts who know Myanmar to the details. We provide travel related services all over Myanmar, ensuring the complete customer satisfaction withayoung team, working closely with you to develop the kind of programs and packages that you want, bringing out the best.
The scope of our services in Myanmar range from guidance and transfers, hotel, and rentacar booking, private cultural tours, excursions, to seaside holiday arrangement and custom-tailored tour packages in accordance with our clients’ special interests.
We also had served door to door parcel delivery services both Domestic & International to any place. Send documents, Bank statements, invitation cards or any parcel simple with Ever Roll Delivery Service, Myanmar.
Throughout the history, Myanmar (Burma) has experienced waves of immigration that have come southwards along the rivers Ayeyarwady (Irrawaddy), Chindwin, Salween (Thanlwin) and Mekong. These movements have brought in many different ethnic peoples,
Almost 90 percent of Myanmar's population practices Buddhism,amajor religion with some 300 million followers worldwide. Its two main branches are the Theravada and Mahayana doctrines.
Living in one of the Nature's most favored lands, the Myanmar are lively and enjoyable people. With agriculture as their main occupation they make an easy livelihood as their natural environment.
Address: No.262, 1st Floor (A), Near (CAPITAL Hypermarket),Ayezedi street, Ba Ma Aye Quarter, DawbonTownship, Yangon, Myanmar.
Phone: +95 9442625602, +95 9763477210